Misonga ny tranga COVID-19 nefa manentana dia araham-panohanana i Japana · Global Voices teny Malagasy
Miakatra ny COVID-19 nefa manao fanentanana fizahatany anatiny ny governemanta
Voadika ny 13 Novambra 2020 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Français, русский, Nederlands, Português, English
(Lahatsoratra 29 jolay 2020)
Pontocho, Kyoto, Jolay 2019. Malaza amin'ny mpizaha tany i Pontocho, ary mandrisika ny vahoaka hitsidika toerana tahaka itony ny fanentanana vaovao Go To ao Japan. Saripikan'i Nevin Thompson.
Mifangarika ny hafatra avy amin'ny governemanta metropolitana ao Tokyo, izay miangavy ny mponina hametra ny fivezivezena tsy tena ilaina, sy ny an'ny governemanta foibe mana fanentanana “Go To Travel” mitentina 1,68 arivo miliara yen (15 miliara USD), izay mikendry ny hampiroborobo ny fizahan-tany anatiny, ka mahatonga an'i Japana ho tery andaniny sy ankilany manoloana ny viriosy.
Tamin'ny alarobia 22 jolay ny governoran'i Tokyo, Koike Yuriko, niangavy ny mponin'ny renivohitra “hihevitra tahaka ny hoe efa tonga ny andiany faharoa (amin'ny COVID-19)” ka hanao ny fihetsika mifandraika amin'izany. Mbola mitoetra ho ivon'ny fihabetsahan'ny tranga COVID-19 ao Japana i Tokyo izay manana mponina 15 tapitrisa. Nahitana tranga COVID-19 miisa 5000 farafahakeliny ny faritra metropolitana tamin'ny volana jolay, na ny tokony ho 45 isanjaton'ny fifindran'aretina rehetra hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina.
Nandritra ny herinandron'ny 20 jolay, niainan'i Tokyo ny fiakarana taha avo ao anatin'ny iray andro manamafy fisian'ny tranga, raha nihoatra ny 200 ny isan'ny nifindrany tao anatin'ny enina andro misesy tao Tokyo. Ahiana mety hirongatra ny COVID-19 ao Tokyo mandra-pahatonga ny volana Aogositra.
Nahitana fiakaran'ny tranga COVID-19 ihany koa ny tanandehibe hafa ao Japana, ao anatin'izany i Osaka sy Fukuoka, tamin'ny volana jolay, raha vao nahitana tranga voalohany amin'ity aretina ity ny vondrom-piarahamonina ao amin'ny nosy Sado mitoka-monina. Hatramin'ny fotoana nanoratana [ny lahatsoratra amin'ny teny anglisy] ny vondrom-piarahamonina ao amin'ny nosy Yoron, izay andrefana indrindra amin'i Japan sady malaza amin'ny fizahantany no nahitana tranga 34, ka 5 izany tamin'ny herinandro mialoha ny fotoana nanoratana.
Na dia teo aza izany fisongan'ny tranga COVID-19 isan'andro izany, tamin'ny 24 Jolay, dia mbola nandà hanambara ny fahamehana ihany ny Praiministra Abe Shinzo, tsy miraharaha ny politikan'ny governemanta, tamin'ny filazana fa “voafehy” ny toe-draharaha. Efa nanambara ny fahamehana manerana ny firenena ihany i Japana indray mandeha tamin'i Avrily sy Mey izay nahombiazana nampihenana ny isan'ny fifindran'aretina isan'andro.
Tamin'ny andro voalohany tamin'ny faran'ny herinandro maharitra efatra andro izay namoahan'ny governemanta tapakilan-dia mampiady hevitra handrisihana ny dia iraisan'ny prefektiora, noraketin'i Tokyo ny isan'olona voa tratran'ny aretina betsaka indrindra hatramin'izay.
Betsaka ireo prefektiora nanamontsana ny isa betsaka indrindra omaly. Resaka faharanitan-tsaina 💩
Fafana amin'ny teny japoney, mandravaka ny fiakaran'ny tranga COVID-19 ao Japon. Hita mazava tsara ny fijotso sy ny fisongan'ny tranga vaovao avy eo.
“Vaovao manokana” andro voalohany izao ny faritra metropolitana ao Tokyo no nanamarika fisian'ny tranga COVID-19 vaovao mihoatra ny 300 (nanomboka tamin'ny 22 jolay).
Fa mbola nanohy tamin'ny fametrahany ny fanentanana “Go To Japan” ihany ny governemantan'i Abe Shinzo tamin'ny 22 jolay, sy fanombohan'ny faran'ny herinandro lava izay maharitra efatra andro. Omen'ny fanentanana “Go To Japan” ho an'ny mpandeha ny karazam-panohanana mahasahana ny dia sy ny fampiantranoana hatramin'ny 20.000 yen (200 USD) isan'olona sy isak'alina ho an'ny mpitsangatsangana ao amin'ny prefektiora miisa 40 manerana an'i Japana.
Noho ny fahabetsahan'isan'olona tratran'ny aretina hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina, dia tsy natao handehanana i Tokyo amin'ny maha-toerana fizahantany azy. Na izany aza, tsy nanakana ny mpizaha tany avy ao Tokyo tsy handeha manerana an'i Japana izany, ao anatin'izany ny prefektioran'Iwate, izay tsy nisy tranga COVID-19 mihitsy.
Mitanjozotra mankany Iwato ny mpizaha tany “GoTo”. “Tsy nahitana tranga tany, noho izany ao no toerana azo antoka indrindra hotsidihana”
(Dika lahatsoratra nopihana) “Fanentanana Go To Japan” mizotra mankany amin'ny prefektioran'Iwate, izay zero tranga COVID-19 tamin'ny fotoana nanoratana.
Samy nanana ny heviny ny olona. Fitsapan-kevitra iray tamin'ny 24 jolay no nanoso-kevitra ny ankamaroan'ny Japoney fa rehefa tena olana henjana ihany ny COVID-19 vao ampiharina ny fanjakana anaty hamehana any amin'ny faritra sasany fa tsy amin'ny firenena iray manontolo. Fitsapan-kevitra hafa no naneho fanoherana henjana amin'ny paika iadiana amin'ny COVID-19.
Misy ihany koa ny fipongaran-tatitra kolikoly, ao anatin'izany ny sisi-bola ho an'ny politisiana nanohana ny fanentanana “Go To Japan” mitentina 1,68 arivo miliara yen. Nasaina hotantanin‘ny birao mpandraiki-dia lehibe iray ny fitantanana izany vola izany fa tsy hotarihana avy ao anatin'ny governemanta.
Mandritra izany fotoana izany, manahiran-tsaina ihany koa ny nifidianana ny teny tigetra “GoTo Travel”:
Taterin'ny tatitra Asahi ny mahatonga ireo mpiteny anglisy hipiapia-kelika amin'ny fanentanan'ny governemanta “Go To Travel”. Nilaza ny mpitondrateny fa nosafidiana izany satria samy mora mahazo ireo voambolana “Go”, “To” ary “Travel” ireo avokoa ny ao Japana
(Dikantsoratry ny lahatsoratra) tsy mety ara-pitsipi-pitenenana (amin'ny teny anglisy) ve ny “Go To Travel”? “Nefa dia izay ny teny anglisy hain'ny ankamaroan'ny vahoaka japoney.”